Ny tranofiara faharoa an'ny andiany SEE dia misy | Avy amin'ny mac aho
Azo jerena izao ny tranofiara faharoa an'ny SEE series
Tamin'ny volana Jona lasa teo, namoaka ny tranofiara voalohany an'ny andiany faharoa vanim-potoana starring Jason Momoa SEE, andiany iray izay, raha ny filazan'ny haino aman-jery isan-karazany, dia naniry ny hanana ilay orinasa monina ao Cupertino ny lalao ny seza fiandrianany, na izany aza, nahazo fandraisana mangatsiaka be avy amin'ireo mpitsikera sy mpampiasa izany.
Ity vanim-potoana faharoa amin'ny SEE ity dia starring Jason Momoa, Dave Bautista, and Alfre Woodard. Izy io dia novokarin'i Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe ary Jonathan Tropper, izay misahana ny fampisehoana ihany koa. Ny andiany dia novokarin'i Chernin Entertainment sy Endeavor Content.
Amin'ny famaritana ity tranofiara faharoa ity dia afaka mamaky isika:
Amin'ny vanim-potoana faharoa dia sahirana i Baba Voss (Jason Momoa) hanambatra ny fianakaviany. Ny rahalahiny Edo (Dave Bautista) dia nisambotra an'i Haniwa zanakavavin'i Baba ary nianiana hamaly faty ny anadahiny. Mandritra izany fotoana izany, misy ny fandrahonana ady amin'ny fanjakan'ny Paya sy ny Repoblikan'i Trivantia, izay mitarika an'i Baba sy ny fianakaviany mankany afovoan'ny fifandonana.
Raha tianao ny vanim-potoana voalohany, ary miandry ny premiere ny faharoa ianao, dia tsy ampy iray volana intsony, hatramin'ny manaraka August 27 ny daty nofidian'i Apple hitory ny fizarana voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa amin'ity andiany ity.
Nanambara ny fe-potoana farany fa nanavao ity andiany ity i Apple tamin'ny vanim-potoana fahatelo ary efa an-dàlam-pandrosoana any Canada izao. Raha ny fahitana azy, tao anatin'ny hetsika toa mikendry ny hampihenana ny vidiny dia nanapa-kevitra ny orinasa mpamokatra miaraka mitifitra ny vanim-potoana faharoa sy fahatelo. Amin'izany fomba izany, tsy mila hiandry herintaona isika vao hankafizantsika ny vanim-potoana fahatelo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Azo jerena izao ny tranofiara faharoa an'ny SEE series
Ny anjara Apple TV + dia 3% raha efa ho 2 taona izao
Titanium Apple Watch Tsy misy: Mivoha